FAQ - Vondrona iraisam-pirenena PEIXIN
1. Inona ny karazana serivisy sy ny fikarakarana mpanjifa omen'ny PEIXIN Group rehefa manofana?
● Azonao atao ny mandefa teknisianina ho any amin'ny orinasa anay hanofana azy ireo ny fomba hampandehanana ny milina alohan'ny handefasana azy amin'ny toeram-pamokarana. Ianao dia omena trano feno amin'ny alàlan'ny orinasa anay
● Rehefa tonga any amin'ny atrikasa ny masin-jazakely, dia mandefa teknisianina amin'ny atrikasa anao hametraka sy hizaha toetra ilay milina ary hampiofana ny mpiasao
● Raha mila teknisiana iray hiasa ho anao mandritra ny fotoana maharitra kokoa ianao amin'ny fotoana, afaka manampy anao izahay amin'ny fahazoana mpiasa efa za-draharaha
2. Tsy mbola vita ny famotopotorana momba ny akora. Raha azo atao, azonao atao ve ny manampy anay amin'ny fisafidianana mpamatsy akora hodi-masaka avo lenta?
● Eny, afaka manohana anao izahay amin'ny fahitana ireo mpamatsy akora milay avo lenta amin'ny tsenanay eto an-toerana
● Afaka mandeha hiaraka aminao izahay hitsidika ireo trano fonenany mba handinihana ny kalitao
● Azontsika atao koa ny mifandray aminao amin'ny mpamatsy avy any ivelan'ny tsena eo an-toerana.
3. Te-hanangana orinasa mpanamboatra lampin-jaza aho, afaka manome soso-kevitra aminao ve aho?
● Eny afaka manampy anao handinika ny vidin'ny lampin-jaza santionany amin'ny tsenanao eo an-toerana
● Izahay dia manolotra aminao ny tatitra momba ny vidin'ny salanisa araka ny santionany, noho izay ahafahanao mahamora kokoa ny kajy vita amin'ny tombony.
4. Inona no olana tokony hodinihiko alohan'ny hananganana orinasa orinasa lampin-jazakely?
Tokony ho fantatrao ny valiny amin'ireo fanontaniana manaraka ireto:
Firy ny diaper tokony hataonao isam-bolana mba hanomezana fahafaham-po ny drafi-barotra sy ny tanjon'ny orinasa?
● Firy ny fiovàna isan’andro tiana hihazakazaka?
● Ohatrinona ny fahaiza-mametraka no mahazo aina ahafahanao miasa?
● Inona avy ireo lafin-javatra ilaina ao amin'ny diaper te hamokatra?
5. Azonao aseho ve ny milina napetraka amin'ny hazakazaka?
Miarahaba anao mitsidika ny tranobenay. Nasehonay aminao ny fomba fihazonan'ny milina eo amin'ny tranokala ary azontsika atao koa ny maneho ny fomba fandehanan'ny milina eto amin'ny tranon'ny mpanjifanay eo an-toerana raha mahaliana anao ianao.
6. Nahoana aho no tokony hifidy ny milina?
● Manana traikefa an-taonany 30 amin'ny famokarana milina famokarana fahadiovana
izahay ● Nahavita nahazo fandrosoana ara-teknolojia avo lenta momba ny vokatra famokarana izahay
● teknisianina PEIXIN dia tany amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao hanolotra serivisy aftersales ao amin'ny orinasa mpanjifa. Izy ireo dia za-draharaha sady mahay tsara
● Azonao atao ny mampitaha ny mari-pahaizana ara-teknikan'ny milina miohatra amin'ny fitaovan'ny mpamatsy hafa - ho hitanao fa tena manintona ny fandrosoana ara-teknolojia sy ny vidin'ny masin-tsika
● Vokatra ny ampahany amin'ny lozinay ho vokarina amin'ny alàlan'ny laharana CNC / solosaina informatika fifehezana / miaraka amin'ny haingam-pandeha avo lenta, dia manamboatra milina kokoa izy ireo ary milamina kokoa izy ireo eo ambanin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha
Panty Liner Production-dalana , mando mamafa Machine , Mini pad Production-dalana , Lady pad Machine , Mirosoa Up Machine , Daily fidiovana Machine .